admin – CYMRU
No Comments on Imidlalo yeMarble kunye nokungcakaza
Olunye lweenkcazo ezilungileyo endikhe ndazifunda malunga nokwenzeka kunye nomda wendlu osetyenzisiweyo ukubonisa imephu ebalulekileyo. Ndizakusebenzisa esi sithuba ukuchaza ukuba imibala yemarble eyahlukileyo ingasetyenziswa njani ukwenza umdlalo olula wekhasino.
Ikwangumzekeliso omkhulu wendlela onokwenzeka ngayo kunye nomda wendlu.
Ndiza kugubungela imixholo emininzi ebalulekileyo kule posi kwaye ndzoba i-analogies phakathi kwemidlalo yemabula kunye nongcakazo.
Umdlalo weHypothetical Casino usebenzisa iiMarble ezahlukeneyo
Masithi udlala ikhasino yendawo yokuhlala ephantsi komhlaba, kwaye kufuneka uze nomdlalo wexabiso eliphantsi. Uthengela inqwaba yemarble ebomvu nemnyama kunye nengxowa yephepha ukuze uzifake.
Ngeenjongo zalo mzekeliso, siyakuthi uneemayile ezili-15 zizonke. Ezisithoba zazo zimnyama, kwaye ezintandathu kuzo zibomvu.
Kwakhona, iimarble kufuneka zibe nobungakanani obufanayo kunye nobunzima, okanye awuyi kuba nomdlalo ongenamkhethe. Isizathu soku kufuneka sivele.
Umdlali ufikelela ebhegini kwaye akhethe imabula ngaphandle kokujonga.
Kodwa kuqala, umdlali kufuneka abheje ebomvu okanye emnyama. Okokugqibela, iintlawulo zokubheja ngokubomvu okanye emnyama zezi zilandelayo:
Ukubheja kwabantsundu kuhlawula nge-7 nge-5
Ukubheja kubomvu kuhlawula ku-3 nge-1
Ukuba uyasiqonda isisombululo esinokwenzeka, kulula ukubona ukuba yeyiphi ukubheja ekufuneka uyenzile kwaye ngoba.
Nantsi indlela yokufumanisa oku.
Inyathelo lokuqala lihlala ukubala amathuba okuba iziphumo
Kulomdlalo wekhasino wokulinganisa wemarble, uneziphumo ezimbini ezinokubakho:
Siza kubala amathuba okuba zenzeke zombini ezi meko kwaye zichaze ukuba kungenzeka ngeendlela ezininzi zokwenza umzekelo.
Isiphumo sesiphumo linani nje leendlela onokuthi ufezekise ngazo iziphumo xa kuthelekiswa nenani leziphumo.
Ngamanye amagama, ukufumana ithuba lokukhetha imabula emnyama, wahlulahlula inani leemabula ezimnyama ngenani elipheleleyo leemabula.
Kwaye kule meko, uneemayile ezimnyama ezilithoba ngaphandle kwamanqaku ayi-15, ke ngoko ke ukubakho kwe-9/15.
Njengalo naliphi na iqhezu, ungalinciphisa elo qhezu. Kule meko, i-9/15 ihla iye kwi-3/5.
Nantso indlela ochaza ngayo ukuba kunokwenzeka ukufumana imabula emnyama ngefomathi yamaqhezu, 3/5.
Kodwa unokubonisa oku njengepesenti ezingama-60%.
Indlela eqhelekileyo yokubonisa oku iya kuba njengezothe ngokuchasene nokwenzeka, ziyi-6 ukuya ku-9, ezinokuthi zincitshiswe zibe zi-2 ukuya kwezi-3 ezingathandekiyo.
Isiphumo esimalunga nokubalwa kukuba kungenzeka ukuba ufumane imabula ebomvu. Kuba uneemayile ezi-6 ezibomvu, loo nto ingo-6/15, okanye 2/5.
Yayiipesenti ezingama-40 xa ibonakalisiwe njengepesenti, kwaye ke 3 kuye ku-2.
Enye indlela ongajonga ngayo umsebenzi wakho kabini xa ubala amathuba kukukhumbula ukuba kungenzeka ukuba zonke iziphumo zinokwenzeka zihlala ziyi-100%.
Ukusukela ngama-60% + 40% = 100%, ndiqinisekile ukuba ndinesibalo esifanelekileyo.
Kwakhona, 3/5 + 2/5 = 5/5, ikwayi-100%, kulungile, kunjalo.
Inyathelo lesibini kukubala ixabiso elilindelweyo
Ixabiso elindelekileyo lingakanani ulindele ngokwezibalo ixabiso lokubheja ukubheja ixesha elide. Ixabiso elindelekileyo lidla ngokungabi nanto ukubheja kwekhasino. Ukuba ubheja i-100 yeedola kwimidlalo yasekhasino, ulindelo lwakho lwezibalo kukuphulukana nomndilili we- $ 1 ukuya kwi-5 yedola kuloo kubheja, ukwenza ixabiso elilindelweyo ukubheja phakathi kwe- $ 95 ne- $ 99.
Masiqale ngexabiso elilindelweyo lokubheja komntu omnyama. Into yokuqala ekufuneka uyiqaphele kukuba ukungasebenzi kuhlawulwe kuchazwe njengo-7 “ngo- 5, ​​HAYI 7“ ku ”5.
Ngokubanzi, xa umdlalo we tafile yekhasino uhlawula, uhlawula “ngo” ngokungangqinelani. Oko kuthetha ukuba uza kuphumelela, ufumana ukubheja kwakho kunye nokuwina kwakho.
Uninzi koomatshini bokungcakaza bayihlawulela “ngokungafanelekanga.” Oku kuthetha ukuba ukuba uphumelele, ufumana isixa esipheleleyo esiphumeleleyo, kodwa awubuyi ukubheja kwakho.
Ukuba ukubheja kuhlawula 2 nge-1, wenza inzuzo yeyunithi enye.
Ukuba ukubheja kuhlawula nge-2 ukuya kwi-1, wenza iingeniso ezimbini.
Umahluko obalulekileyo ekufuneka ufunde ukuwenza. Nge-7 yeyokuhlawula oku-5, uza kubona inzuzo yeeyunithi ezimbini xa uphumelela ukubheja.
Kutheni sicebisa ukuba sidlale iiSlots zaseNtlalontle
No Comments on Kutheni sicebisa ukuba sidlale iiSlots zaseNtlalontle
Kumashumi eminyaka, oomatshini be-slot bebekhona kuphela kwifom enye. Kwakufuneka utyelele ikhasino esekwe emhlabeni kwaye udlale umatshini okanye indawo yevidiyo.
Uninzi lwabantu abangcakazayo lusakonwabela ukudlala le midlalo kwizitena zodaka kunye nodaka lwangoku. Nangona kunjalo, iindidi ze-slots ziye zanda kwiminyaka yamuva.
Ungadlala imali yokwenene kwi-intanethi kunye nakwiindawo zokudlala. Ezi zinto zidume ngokuthandwa kakhulu kusetyenziswa indawo zentlalo ntle.
Nangona kunjalo, ndicinga ukuba ingcinga epheleleyo yezilokishi zentlalo ayinamsebenzi. Ndizakucacisa ukuba kutheni ngezantsi apha kunye nesizathu sokuba ubacingele kakhulu ukuba boyika.
Zithini ii-Slots zentlalo?
Njengoko igama lisitsho, indawo ezikhoyo ziyafumaneka kwiisayithi zosasazo loluntu. Baqala babhenela ku-Facebook ngeZynga Casino.
Ezi ndawo ezisebenza ngokufihlakeleyo kwi-Facebook zisaziwa kakhulu namhlanje. Nangona kunjalo, umdlalo wentlalo uye wanda ukubandakanya ezinye iintlobo zewebhusayithi.
Ngokungafaniyo nokubekwa kwindawo esekwe kumhlaba okanye kwi-kasinos kwi-intanethi, le midlalo ayinikezeli ithuba lokuphumelela imali yokwenene. Endaweni yoko, bakubona uphumelela iingqekembe zemali (ezibizwa ngokuba “zii-tokens”) ezingenalo ixabiso lemali.
Usenokuba uyazibuza ukuba kutheni emhlabeni umntu engafuna ukudlala mahala sots ngaphandle kwemizuzu embalwa. Emva kwayo yonke loo nto, abanalo ithuba lokuphumelela imali enkulu.
Impendulo kukuba abadlali abanomdla kwiindawo zokulala banokugqibezela imishini, bafezekise, kwaye babelane ngezinto abazenzileyo nabahlobo. Umzekelo, umdlali we-Facebook slots unokuqhayisa malunga ne-1 yezigidi zeedola zemali kwi-buddies yabo.
Ewe, iikhasino zentlalo aziboneleli ngezi nkonzo ngenxa yokulunga kweentliziyo zabo. Endaweni yoko, benza imali ngokukhuthaza abadlali ukuba bathenge ezinye iingqekembe.
Iindawo zokulala ezikhoyo eluntwini, njengalo naluphi na uhlobo lomatshini wokulalisa, zibonisa umphetho wendlu. Amathuba aphakamileyo okuba ekugqibeleni uya kuphulukana neempawu.
Okwangoku, unokuhamba ngenkqubo yokwenza i-akhawunti entsha ye-imeyile kunye nokubhalisela indawo kwakhona phantsi kwegama elahlukileyo. Okanye unokumane uthenge iingqekembe ezininzi kwaye uqhubeke nokudlala.
I-Slots zaseNtlalontle vs I-Real Money Slots
Ukutsalwa kwezentlalo kujongeka kwaye kudlalwe kakhulu njengemigangatho ye-intanethi ekumgangatho. Nangona kunjalo, nabo banomahluko ohlukileyo ukusuka kwiindawo zokubeka rhoqo.
Imidlalo yekhasino yentlalo ayibonisi ukuba kubhatalwe imali yokwenyani. Endaweni yoko, bahambisa iingqekembe ezinokukunceda ufumane iiavatas ezipholileyo, iibheji kunye nomsebenzi ogqityiweyo.
Oomatshini be-slot zentlalo bayakukhuthaza ukuba wabelane ngezinto ezifeziwe kunye nabahlobo. Umzekelo, unokufuna ukubonisa i-avatar yakho yakutshanje nomntu wonke kuluhlu lwabahlobo bakho.
Le midlalo ibonisa imizobo enemibala ngakumbi kunye neekhathuni kune-slot ephakathi, nayo. Zenzelwe iinjongo zokuzonwabisa kunokuba zenzeke ngokwenyani.
Imidlalo yeNtlalontle ifumaneka kuphela kwiiwebhusayithi nakwiisoftwe zekhasino zentlalo. Awuyi kuhamba kwikhasino yezitena kunye nodaka kwaye ubone oomatshini bokuncinitha.
Kutheni le nto Slots Suck?
Nangona Slots zentlalo ziye zaziwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi beendaba zosasazo, banezinto ezinobungozi. Nazi izithintelo eziphambili kule midlalo.
Akukho thuba lokuphumelela kwiMali yangempela
Iimbasa ziye zathandwa kwindawo yokuqala kuba zinika abantu abangcakazayo ithuba lokuphumelela amabhaso amakhulu. Umzekelo, unokuba nethuba lokuphumelela ekuhlawulweni okuxabisa i-50,000x kwisibonda sakho kumdlalo othile.
Ayizizo zonke iindawo ekunikezelwayo ukuba zibonise jackpot enkulu. Nangona kunjalo, wonke umdlalo ubonakalisa ubuncinci amabhaso ahambelana nesayizi yakho yokubheja.
Awunalo naliphi na ithuba lokuphumelela ezinkulu ngecala loluntu. Ngapha koko, awunalo ithuba lokuphumelela elincinci ngale midlalo nokuba. Endaweni yoko, uzama ukubambisa iikhredithi ezingasetyenziselwa ukuthenga izinto zexabiso elingelilo.
Uya kuchitha imali kwindawo ethile
Ezinye iikhasino zentlalo ikakhulu zixhomekeke kwingeniso yentengiso. Banikezela imidlalo yasimahla kunye namabhaso atshintshiselayo ukuze ujonge iintengiso eziboniswe kwiscreen.
Nangona kunjalo, uninzi lweendawo zokudlala ezikhoyo zilindele ukuba abathengi basebenzise imali ngaxa lithile. Banokubonelela nge-100,000 yeengqekembe, okanye ngaphezulu, ngaphambili, kodwa banethemba lokuba uya kuzithenga namathokheni.
Akukho nto ikunyanzelayo ukuba uthenge ezinye iingqekembe. Nangona kunjalo, unokukhuthazeka ukuba ukwenze oko xa uphulukile okokuqala kwaye ufuna ukuhlangana nabahlobo bakho malunga neebheji.
Layisha kwakhona iibhonasi musa ukuphinda ulayishe imali yakho
Amakhasino akwi-intanethi adla ngokubonelela ngeebhonsi zokuphayisha kwakhona. Le yokugqibela ibhekisa kwiibhonasi zediphozithi ezifumanekayo xa ufaka kwakhona i-akhawunti yakho ngemali engaphezulu. Ungasebenzisa okunikezelwayo ukufumana imali yasimahla.
Iindawo zokudlala zoluntu zithathe indawo kwi-intanethi yekhasino malunga noku. Babonisa ukuphinda kulayishwe iibhonasi ezixabisa amawaka okanye izigidi zemali.
Umahluko ophambili, nangona kunjalo, kukuba ezi bhonasi azikokunika nayiphi na imali. Banikezela ngokudlala ngakumbi kwi-yekhasino enikeziweyo.
IiJackpots ayisiyongozi ngokwenene
Ungaphumelela i-jackpots ngoomatshini be-slot zentlalo. Ngelishwa, unokuziva ngathi la mabhaso ayinyani.
Kwakhona, uphumelela iithokheni ezinokusetyenziswa ukuqhubeka nokudlala imidlalo. Awuqokeleli nawaphi amabhaso axabisekileyo
Mhlawumbi usaya kuzixabisa ezi jackpots ukuba ngokwenene ufuna ukugqiba utyelelo kunye nokubheji.